Sidecar: Dhata-Inotungamirwa Amazon Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Sidecar: Dhata-Inotungamirwa Amazon Kushambadzira Maitiro
Chipiri, Gunyana 1, 2019 Chipiri, Gunyana 1, 2019 Douglas Karr
Amazon haisi iyo chete huru e-commerce yekuenda pawebhu, zvakare iri inotungamira yekushambadzira chikuva. Nepo vateereri veAmazon vari muhombe uye vashanyi vakafarirwa kutenga, kufamba mugero kunoratidza kuve kwakaoma.
Yakatangwa svondo rapfuura, Sidecar yeAmazon ipuratifomu inofambiswa neiyo yepamusoro AI uye echisikigo mutauro kugadzirisa. Ipuratifomu inobatsira vatengesi kuti vashandise marongero anotungamirwa nedata uye maitiro akaratidzirwa akanakisa kufambisa mari inokosha kubva Amazon Inotsigirwa Zvigadzirwa, Sponsored Brands, uye Ratidza Ads.
Tichitarisa padivi peSidecar kugadzirisa matambudziko ekushambadzira kwevatengesi, kwaive kuwedzera kwechisikigo kwatiri kuvaka mhinduro inogadzirisa zvinosangana nevatengi vedu neAmazon Advertising.
Mike Farrell, Senior Director weMusika uye Mutengi Intelligence weSidecar
Sidecar tekinoroji inogadzira manejimendi manejimendi manejimendi, inoratidzira kurondedzera, uye inoshandisa hunyanzvi hwekutengesa hwekambani kuvhura mikana mitsva kuAmazon.
Sidecar yeAmazon Bhenefiti:
Gadzirira mishandirapamwe isingarwadzi - Vimba neSidecar's otomatiki kuchinjisa macampaign kune akasiyana-siyana senge nzira dzekugadzirisa uye maitiro ekuita.
Sevha nguva & zvekufungidzira - Deredza kushushikana kwekudzidza chiteshi chitsva. Shift nguva yako kubva kushambadziro logistics kuenda kubhizinesi zano uye iro rese reAmazon Flywheel.
Dzidzisa muchinjika-chiteshi zano - Nyore kupinza ruzivo kubva kune ako mamwe makwara ekushambadzira muAmazon kutyaira akabatana zano.
Hunza pachena kujekesa - Wana maonero akajeka ekuti zvigadzirwa zvinowirirana sei kushambadziro. Tora matanho zvichienderana nekuti kushambadzira kuri kubatsira sei kune rako repazasi mutsara.
Maitiro Sidecar eAmazon Anoshanda
NaSidecar tekinoroji inobata matekiniki, timu yavo yakazvipira yekuita kwekushambadzira zvayakanakira kubatana newe kutyaira chiteshi zano. Zvakaguma nei? Kukurumidzisa kutengesa kuita uye yakasimba kukwikwidza mukana iwe unogona kuyera uye kurondedzera.
Mushandirapamwe Wemamiriro Ekuvaka - Dzivisa musoro wemusoro wekuvaka nemaoko eAmazon kushambadzira. Sidecar inogadzira yakagadziriswa mushandirapamwe nekupa zvigadzirwa kumamwe mapoka ekushambadzira uye nekuisa smart mabhizimusi ayo anotengesa zvakanyanya pavanenge vachidhonza kumashure kushandisa kune vashoma vanoita. Iyi otomatiki tech inogara iripo uye ichimhanya kuverengera chimiro chinoramba chichigadziriswa zvichienderana neshanduko mukuita kana zvigadzirwa zvitsva zvawedzerwa.
Kushambadzira Eligibility Management - Bvisa icho chidimbu chekubvisa nemaoko zvigadzirwa kubva kumishandirapamwe. Maitikiro maitiro anoshanda kure seti yemutengesi-yakatsanangurwa bhizinesi mitemo yekugadzirisa chigadzirwa kushambadzira kukodzera kunoenderana nemamaki kana marangi marongero.
Tsvaga Query Manager - Kudza kugona kwako kushandura vatengi vepamusoro-chinangwa nemazwi akakodzera. Uchishandisa mutauro wechisikigo, Sidecar inoenderera ichiongorora mibvunzo yekutsvaga kuti vaone mazwi matsva ari kushandiswa nevatengi kuwana zvigadzirwa zvako. Sidecar inopa ruzivo rwakapfuma uye mazano izvo zvimwe zvisingawanikwe papuratifomu yeAmazon.
Bhinda Management - Ita akangwara, zvoga bhizimusi sarudzo. Rondedzero yeAmazon yakabhadharwa kazhinji hairatidze mashandiro echokwadi, zvichitungamira vatengesi kuti vachinje zvisina basa bhidha. Sidecar inoshandura zvine simba mabheji pane ese mapoka eboka uye musimboti wekusimbisa mashandiro ezvigadzirwa zvese.
Kuzivisa uye Kuona Dhata - Vhura iyo izere kugona kweAmazon data. Isingavhiringidzike nemawadhi mashoma eAmazon ekuzivisa, windows Sidecar tekinoroji inoratidza kushambadzira mashandiro ane yakazara vhiki-pamusoro-svondo uye mwedzi-pamusoro-mwedzi kuenzanisa. Izvo zvinokupa iwe yakajeka maonero ekuti kushambadzira kuri kukanganisa sei kukura.
Sidecar yeAmazon inoenderana nekambani iripo mutsara wecross-chiteshi mhinduro, iyo inosanganisira kutsigira kunotenga uye akabhadhara mari yekutsvaga paGoogle neBing, pamwe nemishandirapamwe kuyambuka Facebook / Instagram uye Pinterest.
Rega nyanzvi dzeSidecar dzizarure mikana mitsva paAmazon ine yemahara, isina-yekusungirwa kuita kwekuongorora:
Tora Mahara Ongororo kubva kuSidecar
Tags: Amazon Inotsigirwa MhandoAmazon Inotsigirwa ZvigadzirwaSidecar yeAmazon
Ndeapi Nyika Anopemberera Nhema Chishanu?
Icho Chaizvoizvo Kubatanidzwa?